Kulamo ka socda Kismaayo iyo xafladda caleema saarka Axmed Madoobe oo dhawaan bilaabanaysa | Somsoon
Home WARAR Kulamo ka socda Kismaayo iyo xafladda caleema saarka Axmed Madoobe oo dhawaan...
Kulamo ka socda Kismaayo iyo xafladda caleema saarka Axmed Madoobe oo dhawaan bilaabanaysa
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in halkaas ay kulamo ugu socdaan hoggaanka Jubbaland iyo siyaasiyiin halkaas u gaaray ka qeyb galka caleema saarka madaxweyne Axmed Madoobe.
Kulamadaas ayaa waxaa la sheegayaa in ay qeyb ka yihiin Madaxweynayaashii hore ee dalka, Xasan Sheikh Maxamuud,Shariif Sheikh Axmed, Madaxeweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Maxamed Dani, hoggaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdiskuur Warsame, Xidhibaano iyo Senatoro ka tiran baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Mas’uuliyiin qeyb ka ah kulamadaas ayaa noo sheegay intooda badan in looga arinsanayo go’aankii ay dowladda dhexe ka soo saartay duulimaadyada tooska ah ee magaalada Kismaayo iyo guud ahaan dalka Kenya, kuwaas oo waajib looga dhigay in ay soo maraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Munaasabadda caleema saarka Axmed Madoobe ayaa lagu wadaa in saacadaha nasoo aadan lagu qabto magaalada Kismaayo, iyadoo ay ku dhawaaqeen xubno sare oo ka tirsan dowladda Kenya in ay ka qeyb galayaan caleema saarka Axmed Madoobe, wallow aan la ogeyn si ay ugu suurta gali doonto, maadaama ay dowladda dhexe mar kale xayiraad saartay duulimaadyada tooska ah ee Kismaayo iyo Kenya.
Article horeXildhibaano diyaariyay Mooshin ka dhan ciidamada Kenya ka jooga Soomaaliya
Article socoda Saraakiil ku geeriyootay diyaarad ku burburtay dalka Itoobiya